Clary (ကလယ်ရီပန်းအဆီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Clary (ကလယ်ရီပန်းအဆီ)
Clary (ကလယ်ရီပန်းအဆီ) ကဘာလဲ။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ကွက်သား၊ အကြောတွေတောင့်တင်း ရောင်းရမ်းခြင်း အတွက်သုံးတတ်ပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ သွေးဆုံးချိန်၊ ဓမ္မတာမလာခင် တွေ့ကြုံရတတ်သည့် လက္ခဏာများကို သက်သာရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုသလို၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ လိင်ဆန္ဒလျှော့ချပေးဖို့အတွက်လည်း သုံးတတ်ကြပါတယ်။
အက်ဒရီနယ်ဂလမ်း(adrenal gland) အလုပ်ပိုလုပ်ရန်နှင့် လည်ချောင်းနာခြင်းတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
ထိုဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွတ်စာလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်လို့ လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေမှာ ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ မှိုတွေကိုသတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါကြောင်း လေ့လာမှုတွေတော့ရှိပါတယ်။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ပူလွန်းသော၊ စိုထိုင်းသော နေရာမှဝေးရာ ခြောက်သွေ့ရာနေရာမှာသိမ်းဆည်းပါ။
ဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွတ်စာတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေက ဆေးတွေလောက် စည်းကမ်းမတင်းကြပ်ပါဘူး။ ဘေးကင်းမှုကို ထောက်ခံပေးဖို့က လေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွတ်စာတွေကို မမှီဝဲမီ ရနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ချင့်ချိန်သင့်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်သည်၊ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ သာမန်စားသောက်ရုံ ပမာဏလောက်သုံးစွဲပါက ဘေးကင်းပါတယ်။ ပိုများတဲ့ပမာဏကိုတော့ လေ့လာမှုတွေမပြုလုပ်ပြီးခင်ထိ မသုံးသင့်ပါဘူး။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
မူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ကြွခြင်း၊ မိန်းမောခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုးမက်ခြင်း
ဓမ္မတာသွေးများခြင်း တို့အပါအဝင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါတယ်။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
အိပ်ငိုက်စေနိုင်သော choral hydrate, hexobarbial တို့သက်ရောက်မှုကို တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဒီအချက်အလက်တွေဟာ ကျန်းမာရေးအကြံဉာဏ်တွေအတွက် အစားထိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
လူနာအသီးသီးအတွက် ပမာဏအသီးသီးဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နဲ့ တခြားအချက်တွေ အများအပြားပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ။် ကျန်းမာရေးဖြည့်စွတ်စာတွေဟာ အမြဲဘေးကင်းနေတာတော့မဟုတ်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကလယ်ရီပန်းအဆီ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 182.
Clary sage. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-407-clary%20sage.aspx?activeingredientid=407&activeingredientname=clary%20sage. Assessed August 7, 2016.
ယူကလစ်အဆီ(Eucalyptus Oil) နဲ့ Acacia Gum တို့က ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေစွမ်းသလဲ
Keto Flu ဆိုတာ ဘာလဲ…
ကိုယ်ပေါ်က အဖြစ်အများဆုံး ကိုက်ခဲခြင်းပြဿနာတွေကို ဒီလို ဖြေရှင်းကြည့်ပါ။
အာသးီဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေ ။ ။